MySansar – Page 10 – A Nepali blog running since 2005. Seen by many as an antidote to mainstream media
नेटफ्लिक्समा चार्ल्स शोभराजको ‘द सर्पेन्ट’ : एक क्रुर अपराधी जो नेपालको जेलमा छन्
Posted on April 11, 2021 April 11, 2021 by Salokya
बीबीसी वनमा जनवरीमा प्रसारण भएको केही समयपछि नै डाउनलोड गरी राखेको थिएँ आठ भागको सिरिज ‘द सर्पेन्ट’। चार्ल्स शोभराजको जीवनीमा आधारित भएकोले पनि मलाई यो सिरिजमा चासो बढेको थियो। तर हेर्ने समय नै जुरेन। केही अघि नेटफ्लिक्समा पनि यो उपलब्ध भएपछि समय मिलाएरै दुई दिन लगाएर हेरी भ्याएँ। शोभराज त्यस्ता अपराधी हुन् जसले धेरैको क्रुरतापूर्वक… Continue reading
एक वाक्यको सूचनामा कति गल्ती गन्नुस्
Posted on April 11, 2021 by Salokya
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेको नेपाल कमर्स क्याम्पसले निकालेको एक वाक्यको सूचनामा कति धेरै गल्ती छ, आफै गन्नुस् त।
Posted on April 8, 2021 by Salokya
सर्वोच्च अदालतले नामको मुद्दामा पार्टी एकता नै खारेज गर्ने फैसला सुनाएपछि त्यसको साइड इफेक्ट वर्तमान मन्त्रिपरिषद्‍मा पनि परेको छ। चार जनाको छँदाखाँदाको मन्त्री पदमात्र होइन, सांसद पदसमेत गुमेको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा चार जना सांसदहरु टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी र प्रभु साहको पद रिक्त भएको औपचारिक जानकारी गराइयो। अब प्रतिनिधि सभामा… Continue reading
पत्रकार महासंघको महा-चुनावमा प्यानल, विद्रोह र धोकाको महा-रमाइलो !
Posted on April 8, 2021 April 8, 2021 by Salokya
देशभरीका पत्रकारहरुको छाता संगठन हो नेपाल पत्रकार महासंघ। चैत २५ गते यसको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय (प्रतिष्ठान, एसोसियट) को महा-चुनाव भयो। महा-चुनाव यस अर्थमा कि पहिलो पटक पत्रकारहरुको चुनावमा प्रत्यक्ष मतदान गरियो। अर्थात् सदस्यहरु सबैले भोट हाल्न पाउने। पहिले यस्तो हुन्थेन। पहिले सदस्यहरुले आफूमध्येबाट पार्षदहरु चुन्थे। अनि उनीहरुले भोट हालेर केन्द्र, प्रदेशका पदाधिकारीहरु चुन्थे। देशभरका… Continue reading
राजा ज्ञानेन्द्रको संकटकाल जारी रहेको बेला ‘ल है मेरो पनि ब्लगिङ सुरु भयो’ भनी सन् २००५ को आजकै दिन (अप्रिल ६) मा माइसंसारमा लेख्न थाल्दा टुङ्गो थिएन त्यो यात्रा कहिले टुङ्गिने हो भनेर। अहिले सम्झँदा पनि रोमाञ्चित हुन्छु। फोन गरेर सर्भरमा जोडिएर चलाउनु पर्ने डायल अप इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जालहरुको अनुपलब्धता जस्ता प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि माइसंसारलाई… Continue reading
फेसबुकको के लिक भएको हो? यसले मलाई के असर पार्छ? जान्नै पर्ने ७ तथ्य
Posted on April 5, 2021 by Salokya
हिजोदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा फेसबुकको चर्चा छ। ५० करोडभन्दा बढी फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुको नाम र फोन नम्बरसहितको विवरण ह्याकरले अनलाइनमा राखिदिएको खबरले प्रविधि जगतमा हङ्गामा मच्चिएको छ। खासमा यो भएको के हो ? यसले तपाईँलाई के असर पर्छ ? जान्नै पर्ने सात तथ्य यहाँ समेटेको छु।
अब के हुन्छ नेपाली राजनीतिमा? तीन सम्भावना
Posted on April 5, 2021 April 5, 2021 by Salokya
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको खुसियालीमा लड्डु खाएका प्रचण्ड र माधव नेपाललाई त्यो लड्डु निल्नु न ओकल्नु बनाउने गरी अर्को फैसला आयो। त्यसपछि राजनीति स्थिर भइरहेको छ। संसद पनि बसेको छ तर खास केही भएको छैन। न अविश्वासको प्रस्ताव आएको छ, न माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको छ, न अरु केही। जस्ताको तस्तै। यही बीचमा… Continue reading
चोलेन्द्रलाई ‘प्रधानमन्त्री’ र गैँडालाई ‘हात्ती’ देख्‍ने कान्तिपुर :)
Posted on April 2, 2021 April 3, 2021 by Salokya
बीचमा एकचोटी खिलराज प्रकरण दोहोरिन्छ भन्ने खुब हल्ला चलेको थियो नि तपाईँहरुलाई याद छ? मतलब प्रधान न्यायाधीश नै प्रधानमन्त्री बन्ने। खिलराज रेग्मी त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बनेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि फेरि संवैधानिक संकट आएर त्यस्तै हुन्छ भन्ने शंका चलिरहेको बेला कान्तिपुरले नै हो क्यार- ‘गल्तीले मिस्टेक गरेर’ चोलेन्द्रशमशेर राणालाई प्रधानमन्त्री लेखेको थियो। अहिले खोज्दा भेटिएन।… Continue reading
पडकास्टमा सुन्‍नुस् : निर्मलाको हत्यारा केही दिनमा पत्ता लगाउने : स्टन्ट हो कि साँच्चिकै ?
Posted on March 30, 2021 by Salokya
निर्मला पन्तको हत्यारा अब केही दिनभित्रै पत्ता लगाइने समाचारहरु केही दिनदेखि विभिन्न मिडियामा पढ्न पाइरहेका छौँ। घटनाको झण्डै तीन वर्षमा प्रहरीले दर्जनौँ पटक यस्ता वाचाहरु गरिसकेको छ। ती वाचाहरु खाली स्टन्ट मात्रै पुष्टि भइसकेको यथार्थ हामी सामु छ। के यस पटक साँच्चै नै निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउनेतर्फ प्रहरी अघि बढेको हो त? के भागरथी घटनामा… Continue reading
निर्मलाको हत्यारा केही दिनमा पत्ता लगाउने : स्टन्ट हो कि साँच्चिकै ?
Posted on March 29, 2021 March 30, 2021 by Salokya
‘निर्मला पन्तको हत्यारा अब महिनामा होइन, दिनमा पत्ता लाग्नेछ।’ ‘निर्मला पन्तको हत्यारा अब २० दिनभित्रै पत्ता लागिसक्नेछ।’ केही दिनदेखि विभिन्न मिडियामा यस्ता समाचारहरु पढ्न पाइरहेका छौँ। घटनाको झण्डै तीन वर्षमा प्रहरीले दर्जनौँ पटक यस्ता वाचाहरु गरिसकेको छ। ती वाचाहरु खाली स्टन्ट मात्रै पुष्टि भइसकेको यथार्थ हामी सामु छ। के यस पटक साँच्चै नै निर्मलाको हत्यारा… Continue reading
आज फागु पूर्णिमा। तराईका जिल्लाहरुमा बाहेक रङ्गहरुको पर्व होली मनाइँदैछ। तर यसपालि पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि बढ्न थालेको देखिएकोले सतर्कता अपनाउनु पर्ने भएको छ। त्यसैले म त घरबाहिर ननिस्की यत्तिकै बसिरहेको छु। अरुलाई होली लागेको छ, मलाई भने अल्छी लागेको छ। त्यसैले होलीको एउटा पुरानो कुरा सम्झन चाहन्छु। कुरा आजभन्दा ११ वर्षअघिको हो। माथिको… Continue reading
पत्रकारलाई चुनाव लाग्यो, कुन पदमा को उम्मेदवार ?
Posted on March 28, 2021 by Salokya
अहिले पत्रकारहरुलाई चुनाव लागेको छ। देशभरका पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिका लागि यही चैत २५ गते चुनाव हुँदैछ। यसका लागि चैत १४ गते दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेदवारीको मनोनयन पत्र दर्ता गर्नुपर्ने थियो। तर पछि समय बढाएर ६ बजेसम्म दर्ता गर्ने समय तोकियो। पहिले तोकिएको समयभित्र अध्यक्ष पदमा एक मात्र उम्मेदवारी गजेन्द्र बुढाथोकीको… Continue reading
Posted on March 26, 2021 March 26, 2021 by mysansar
नेपाली बैँकबाट अनलाइन सपिङका लागि डलर कार्ड कसरी लिने?
Posted on March 25, 2021 March 26, 2021 by Salokya
अहिलेको ग्लोबलाइज्ड जमानामा पनि सानातिना भुक्तानी अनलाइनमा भुक्तानी गर्न नपाउँदा हामी नेपाली साह्रै पीडित थियौँ। न डोमेन नेम किन्न र रिन्यु गर्न सकिने, न होस्टिङको शुल्क तिर्न सकिने, न विश्व बजारमा अनलाइनबाट केही सामान किन्न सकिने ! अनि चोर बाटोबाट ती सेवा किन्न पैसा बाहिर पठाउनुको विकल्प हुँदैन थियो। तर नेपाल राष्ट्र बैँकले भर्खरै आफ्नो… Continue reading
नझुक्किनुस्, पठाओको सेवा बन्द हुन लागेको होइन
Posted on March 23, 2021 March 23, 2021 by Salokya
अस्ति भर्खरैको कुरा हो- अमेरिकी दूतावासले आफ्नो प्रेस विज्ञप्तिमा एउटा गल्ती गर्दा माफी मागेर त्यसलाई सच्याएको सूचना सामाजिक सञ्जालमा राखेको। विज्ञप्तिलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गरी समाचार बनाउँदा नेपालका मिडिया फेरि एक पटक नराम्रोसित चिप्लिए। यस पटक मिडियालाई चिप्लाउने काम अरुले हैन, नेपाल प्रहरीले गरेको थियो। तपाईँहरुलाई याद छ नि- पत्रकारहरुले त्यो अर्बौँ अर्बको बढाबढ गरेर… Continue reading
Posted on March 13, 2021 March 13, 2021 by Salokya
आजभोलिका पत्रकारहरु के साह्रो मेसिन भा’का हौ, अचम्म लाग्छ कहिलेकाहीँ। मेसिन मतलब भएको दिमाग नचलाउने। जे आयो, त्यही लेखेर प्रकाशन गरिदिने ! कति अर्बको पो हो, युरेनियम फेला पर्‍यो रे भनेर एआइजी हरिबहादुर पालले पत्रकार सम्मेलन गरेछन् शुक्रबार। आइजी मुनिका एआइजीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारी भनेर हो कि के हो, आँखा चिम्म गरेर पत्याइहाले… Continue reading
दुई जनालाई सैनिक अदालतले, एक जनालाई मिडिया आफैले बर्खास्त गरिदिएछ
Posted on March 12, 2021 March 12, 2021 by Salokya
हाम्रा मिडियाले पनि रमाइलो गर्छ अचेल। अस्ति भर्खर मिडियाले मलाला युसुफजाईलाई अमेरिकाले दिँदै नदिएको अवार्ड दिलाइदियो। आज फेरि एक महिला सैनिक अधिकृतलाई मिडिया आफैले बर्खास्त गरिदिएछ भन्या। समाचारहरु हेर्नुहुन्छ तपाईँले पक्कै पनि देख्नुभयो होला- २०७७ फागुन २८ गते शुक्रबार देशका प्रमुख मिडियाहरुमा नेपाली सेनाले एक सहायक रथी (जर्नेल) र दुई महिला अधिकृतहरुलाई बर्खास्त गरेको समाचार।… Continue reading
Posted on March 11, 2021 March 11, 2021 by Salokya
‘यसअघि यो पुरस्कार नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला युसाफजाईले पाएकी थिइन्।’ २०२१ मार्च ६ शनिबारको ‘कान्तिपुर’ राष्ट्रिय दैनिकको पहिलो पेजमा ‘नजलेको मुस्कान’ शीर्षकको समाचारमा मुस्कान खातुनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले दिने अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला ‘आईडब्लूओसी’ अवार्ड पाएकोबारे लेखिएको समाचारमा यो वाक्य राखिएको थियो। मलालाले यो पुरस्कार नपाएकोले समाचारको यो दावी गलत रहेको बारे नेपाल फ्याक्ट चेकले तथ्य… Continue reading